မြင့်မြင့်ခင် ထိုး မုန့် ကိုသာ စား ဖူး ကြားဖူးကြပြီး မမြင့်မြင့်ခင် ကိုတော့ မမြင်ဖူး ဘူး မ လား – Shwewiki.com
မြင့်မြင့်ခင် ထိုး မုန့် ကိုသာ စား ဖူး ကြားဖူးကြပြီး မမြင့်မြင့်ခင် ကိုတော့ မမြင်ဖူး ဘူး မ လား
မြင့်မြင်ခင် ဆိုင် မှာ အမြည်းကတော့ အရမ်းကို ရက်ရောတယ်။ မုန်.အစုံ ပန်းကန်နဲ. ထည့်ထားတာ ကြိုက်သလောက်လား။ တခါတလေ ၀ယ်တာတဗူးြ မည်းတာ လေး ငါး မျိုး (၁၀ သားလောက်)။ နင် ရင် ရေ သောက်လိုက်ဦး။ ကလေး တွေ အများကြီးမွေးထားရင် တမိသားစု လုံးသွား မြည်း တန်တယ်။း)
ငယ်ငယ်တုန်းက အရမ်းကြိုက်တဲ့ မလိုင်ကရေကယာ ၀ယ်လာတယ်။ အခုထိလဲ စားလို.ကောင်းတုန်းပါပဲ။ ကေ၇ကယာ ဘာမှန်းမသိတဲ့သူတွေ အတွက် အသေးစိတ် မှတ်တမ်းတင်လာခဲ့ပါတယ်။ကရေကယာ လုပ်ရတာ တော်တော်လက်ဝင်ပုံရပါတယ်။ မလိုင်၊ အုန်းယို၊ အုန်းသီးမူန်. အထပ်လိုက်အထပ်လိုက် လုပ်တားတာ။ စားရတာ အရမ်းလည်း အီပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်းမြင့်မြင့်ခင် ထိုးမုန့်ကိုသာ စားဖူး ကြားဖူးကြပြီးမမြင့်မြင့်ခင်ကိုတော့ မမြင်ဖူးဘူးမလား။ဒါက နိုင်ငံကျော်ထိုးမုန့်မြင့်မြင့်ခင်ရဲ့ ပိုင်ရှင်မမြင့်မြင့်ခင် ပါပဲဗျာ။
မွငျ့မွငျခငျ ဆိုငျမှာ အမွညျးကတော့ အရမျးကို ရကျရောတယျ။ မုနျ.အစုံ ပနျးကနျနဲ. ထညျ့ထားတာ ကွိုကျသလောကျလား။ တခါတလေ ဝယျတာတဗူွးမညျးတာ လေး ငါး မြိုး (၁၀ သားလောကျ)။ နငျ ရငျ ရေ သောကျလိုကျဦး။ ကလေး တှေ အမြားကွီးမှေးထားရငျ တမိသားစု လုံးသှား မွညျး တနျတယျ။း)
ငယျငယျတုနျးက အရမျးကွိုကျတဲ့ မလိုငျကရကေယာ ဝယျလာတယျ။ အခုထိလဲ စားလို.ကောငျးတုနျးပါပဲ။ ကရကေယာ ဘာမှနျးမသိတဲ့သူတှေ အတှကျ အသေးစိတျ မှတျတမျးတငျလာခဲ့ပါတယျ။ကရကေယာ လုပျရတာ တျောတျောလကျဝငျပုံရပါတယျ။ မလိုငျ၊ အုနျးယို၊ အုနျးသီးမူနျ. အထပျလိုကျအထပျလိုကျ လုပျတားတာ။ စားရတာ အရမျးလညျး အီပါတယျ။း)
ဒါပမေယျ့လညျးမွငျ့မွငျ့ခငျ ထိုးမုနျ့ကိုသာ စားဖူး ကွားဖူးကွပွီးမမွငျ့မွငျ့ခငျကိုတော့ မမွငျဖူးဘူးမလား။ဒါက နိုငျငံကြျောထိုးမုနျ့မွငျ့မွငျ့ခငျရဲ့ ပိုငျရှငျမမွငျ့မွငျ့ခငျ ပါပဲဗြာ။
ဇက်ကြော တက်၊ ညောင်း ညာ၊ အ ဆစ်မြစ်နာ တတ် သူတွေအတွက် အံ့ မခန်းဆေး နည်း
သိကြား မင်း သက်စောင့် ဝေဒါသာ ကု ဂါထာေ တာ်ကြီး